जीवन विकास लघुवित्तपछि मनकामना स्मार्टको आइपिओ खुल्ने - News Book Online
जीवन विकास लघुवित्तपछि मनकामना स्मार्टको आइपिओ खुल्ने
News Book Online
असार ९, २०७८ १३:४६ प्रकाशित
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) असार १७ गतेदेखि खुल्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको यस लघुवित्तको प्रधान कार्यालय भैरहवामा छ। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा असार २१ गतेसम्म बिक्री खुल्ला हुनेछ। कम्पनीले जारी पुँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँको ३२.११ प्रतिशतले हुने कुल ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ८९ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो।
जसमध्ये ६ हजार ५८ कर्मचारीका लागि र १९ हजार ४५० कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड हुनेछ। कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा नेपालले डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनीको हिस्सा ६७.८९ प्रतिशत रहनेछ। कम्पनीको आइपिओमा आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जुनसुकै शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस्तै सिडिएससीको ‘मेरो सेयर’मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
प्रतिसेयर अंकित मूल्य १ सयका दरले न्यूनतम १० कित्ता र बढीमा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ५१ पैसा छ। त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १३२ रुपैयाँ ८८ पैसा छ। २०७८/७९ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ५३ रुपैयाँ हुने अनुमान छ। त्यसअघि जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओ असार १३ गतेदेखि खुल्दैछ। प्रतिसेयर आम्दानी नै १ सय रुपैयाँभन्दा धेरै भएको जीवन विकास लघुवित्तको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) असार १३ गतेदेखि खुल्ने भएको छ। कम्पनीको आइपिओमा छिटोमा असार १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले कुल १९ लाख ७७ हजार ३ सय कित्ता सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो।
जसमध्ये ३० हजार ४२० कित्ता सेयर कर्मचारीलाई र ९८ हजार ८६५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम १० र अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त यस संस्थाले आइपिओ निश्कासनका लागि इक्रा नेपालबाट ‘बीबीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ। यसले कम्पनी सुरक्षित रहेको जनाउँछ।
कम्पनीको वित्तीय स्थिति अरु लघुवित्तको तुलनामा मजबुत देखिएको छ। आव २०७६/७७ सम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १०४ रुपैयाँ ९७ पैसा छ।त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ नै ३०७ रुपैयाँ छ। यहीं स्तरको लघुवित्तको मूल्य बजारमा प्रतिकित्ता ५ हजार रुपैयाँको आसपासमा छ। कम्पनीको सञ्चित नाफा नै ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा चैत मसान्तसम्म ०.६० प्रतिशत छ।
मोरङको कटहरीम प्रधान कार्यालय रहेको कम्पनीको देशभर १३८ स्थानमा शाखा तथा उपशाखा कार्यालय संचालनमा छ।
सामलिङ पावर कम्पनिले भोलि बाट सेयर जारी गर्ने,छुट्ला है
भदौ १७, २०७८ १७:१३ प्रकाशित
सानिमा लाइफको ओपनिङ रेन्ज र कारोबार हुने मिति
भदौ १५, २०७८ २१:५५ प्रकाशित
अपांगलाई आइपियोमा दस प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग
भदौ १५, २०७८ २०:२९ प्रकाशित
सीवाईसी लघुवित्तले मालामाल बनाउने कराडाैँकाे आईपीओ ल्याउँदै, जीवन विकास भन्दा कम छैन्, कहिले आउँछ त ?
भदौ १३, २०७८ २२:२० प्रकाशित
सानिमा लाईफको कारोबार मिति र मुल्य विश्लेषण
भदौ १२, २०७८ २२:१२ प्रकाशित
मनग्य कमाउन घरमै बसेर कसरी गर्ने सेयर कारोबार ? सजिलाे तरिका
भदौ १०, २०७८ १४:०३ प्रकाशित
© 2021 NewsBookOnline - Designed by MPG Solution.